Wararkii ugu Dambeeyay Kacdoonkii ka Bilawday Itoobiya
Waxaa sii xoogeysanaya banaanbaxyada ay sameynayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool dalka Ethiopia oo ay kaga soo horjeedaan ineysan helin xuquuqda dhanka dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee dalkaasi.
Ku dhawaad lix ruux ayaa ku dhimatay gobolka Gondar ee dalka Ethiopia ka dib markii ay isku dhaceen dadka banaanbaxyada sameynaya iyo ciidamada booliska dalkaasi, waxaana magaalada Addis Ababa lagu xiray dadweyne banaanbaxyo sameynayay.
Masuuliyiinta dowlada Ethiopia ayaanan ka hadlin dhibaatada ka dhalatay banaanbaxyada, iyadoo jimcihii ilaa iyo hadda dhimashada ay sideed ruux ku dhowdahay, halka boqolaal kale lagu xiray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Dadka Oromada ayaa ka soo horjeeda in dhaqaalaha dalka aan loo sinneyn islamarkaanaay jirto faquuq lagu sameeyo dadkooda, waxaana dhimashada shalay ay timid ka dib markii dad Oromo banaanbax sameynayay ciidamada ay xireen.
Dowlada Holland iyo dowlado kale ayaa durba soo saaray digniino muwaadiniintooda u jeedinayaan oo ah ineysan tagin dalka Ethiopia ilaa inta ay ka joogsanayaan xasaradaha dhanka qabaliga ee ka taagan dalkaasi.